Naya Drishti | सही हो सुर्य थापा ज्यू, हामी ‘असन्तुलित’ नै छौ - Naya Drishti सही हो सुर्य थापा ज्यू, हामी ‘असन्तुलित’ नै छौ - Naya Drishti
सुर्य थापा ज्यू, एउटा अन्तर्वातामा तपाईले ‘एकपाखे’ या यस्तै ‘पाखे’ खै के भन्दिनु भयो, सामाजिक सञ्जाल खुब तातेको छ । मलाई यी शब्दहरुमा त्यति चाँसो छैन । तपाईले ‘एक’ फ्ँयाकेर ‘पाखे’ भन्दिए पनि मलाई आपत्ति छैन । हामी छौ नै त्यस्तै, बस्छौ नै पाखाहरुमा । बरु अलिकन चाँसो मलाई तपाईले संगै बोलेको शब्द ‘असन्तुलित’संग हो । र, हामी साँच्चिकै ‘असन्तुलित’ नै छौ ।
लोकतन्त्रको प्राप्तिपछि लागेको थियो, देश साँच्चै समृद्धिको यात्रामा लाग्दैछ । दुईपटक संविधानसभाको चुनाव भएपछि ७२ असोजमा संविधानको घोषणा भयो । ०६२–६३ देखि ७२ सम्मको यो दशकमा नेपाली जनताले राज्यबाट प्राप्त गरेको एउटा त्यहि ‘किताब’ न हो । किताबमा लेखिएका शब्दहरुले त हामी सबैलाई गिज्याइरहेकै छन् । र, हामीले यसो भन्ठान्यौ, यो दशक संविधान निर्माणको दशक भयो, अरु हुनुपर्ने धेरै कुराहरुको निर्माण भएन पनि ।
संविधान निर्माण पश्चात त केही हुन्छ लागेकै हो । तर लाग्दालाग्दै आधा दशक बित्यो । अब अर्को आधा दशक पनि लाग्दालाग्दै बित्नेछ । म निश्चिन्त छु । आजको मितिसम्म कहीं केही नयाँ हुने सुरुआत कहींकतै देखिदैन ।
छोराको ह’त्याराको कारवाहीको माग गर्दै अनशन बसेर ६ बर्ष अघि ज्यान गुमाएका अधिकारीको लासले हामीलाई गिज्याइरहेको छ । हामी मौन छौ । डा. गोविन्द के.सी. स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका खातिर भन्दै बारबार अनशन बसिरहेछन् । सरकार पागलको संज्ञा दिंदै लात हानिरहेछ । हामी मौन छौ ।
निर्मला पन्तको घटनाको साक्षी यो युगले हामीलाई बनायो, तर सरकारले सुन्ने गरि हामीले आवाजको झापडले हिर्काउन सकेनौ । किसानको पसिना भन्दा बढी आँसु झर्यो आँखाहरुबाट, हामी केबल हेर्न मात्रै सक्यौ । करोडौैंकरोड भ्रष्टचारका मुद्दाहरु सार्वजनिक भैरहँदा हामी मौन छौ । महामारी र महाआतंकको बीचमा सरकारले जोक सुनाइरह्यो, हामी मज्जाले हाँसेर बस्यौ ।
राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरुमा राज्यका अंगहरुका मालिकका भाइ, भतिजा, ज्वाँइ, बहिनी, सम्धी र सालाहरुको राज चलिरहँदा पनि हामी मौन छौ । गरिबी, भोक र अभावले जनतालाई कोर्रा लगाइरहेछ, सरकार मुश्कुराइरहेको टुलुटुलु हेरिरहेका छौ हामी ।
यस्तो ज्यादती चलिरहँदा पनि मौन बस्न त मानसिक सन्तुलन गुमाएकाहरुले मात्रै सक्छन्, एक चेतनशील मान्छेले सक्दैन । देशमा एउटै मान्छे जसले केही गर्यो, कुलमान । कुलमानको पुनःनियुक्तिको माग राख्दै हामीहरु सडकमा गइदिने ?
सत्य कुराको समर्थन गरेर सरकारलाई लज्जित बनाउने दुस्साहस गर्यौ हामीहरुले । हामीहरु पागल हौं । हेर्नु न थापा ज्यू, तपाई त सरकारको प्रेस सल्लाहकार, तपाईँको आवाज त सरकारको आवाज हो । स्वंय तपाई यति छाडा भइरहँदा हामी चाँही मौन बसिरहेछौ । अनि हामी ‘असन्तुलित’ नभएर अरु को हुन सक्छ?
#घनश्याम #सुर्य थापा
‘घटिया र चोर’ भन्दै बामदेबको सचिवालयले खुइल्यायो सुर्य थापालाई ( हेर्नुहोस सम्पूर्ण तथ्य )